Ụbọchị My Pet » 5 Ajụjụ Ndị Ị kwesịrị ịjụ On Mbụ Ụbọchị
emelitere ikpeazụ: Sep. 18 2020 | 2 min agụ
Mbụ ụbọchị nwere ike ịdị ka ajụjụ ọnụ, ma n'ihi na ịhụnanya gị ndụ. Ha na-eme gị ma ụjọ na obi ụtọ. Ma mgbe ụfọdụ i nwere ike ịhụ onwe gị otú iwesa gị ụbọchị echiche nke gị na ndị ọgwụgwụ nke ụbọchị, ị na-aghọta na ị na mụtara ihe ọ bụla banyere ha.
Unu fret, e nwere ihe a ngwọta maka nke a.
Ndị a 5 ajụjụ ga-hụ na ị na-eje ije pụọ gị mbụ ụbọchị obi ike ịmara ma ọ bụrụ na ị ga-enwe mmasị na ịhụ ha ọzọ.
Gịnị bụ ọkacha mmasị gị ihe na-eme?
Nke a bụ ihe dị mfe otu ebe a otutu anyị n'anya na-ekwu okwu banyere onwe anyị. Ọ ga-ekwe ka ị na-atụgharị uche na gị na ụbọchị na n'ezie ịmụta ihe na-eweta ha ọṅụ. Emekarị mgbe ị na-ajụ ajụjụ a, gị ụbọchị ga na-ekpughe na ha adịghị amasị. Were ihe na-positives na negatives - zoro ha Ibọrọ nwere ike ịbụ oké echiche maka nke abụọ ụbọchị dabere na ha ọdịmma.
Olee mgbe gị na kemgbe otu?
Nke a nwere ike iyi ka na-ata na ajụjụ ma ọ bụ ihe dị mkpa. Ịmara ọ bụrụ na gị ụbọchị na-ahọrọ na-alụbeghị di vesos ha ịbụ otu ma ifịk ifịk achọ, ga-eme ka ị mara ma ọ bụrụ na ị na-etinye oge gị amamihe n'ime mbụ a ụbọchị. Ị chọrọ ijide n'aka na mmekọrịta gị ihe mgbaru ọsọ dakọtara. Ikpeazụ ihe ị chọrọ bụ ka unu abụọ na-achọ dị iche iche ihe na ịchọta a ọtụtụ ụbọchị gasịrị.
Ị nwere ihe ọ bụla ụmụnne?
Ịjụ ajụjụ a dị ukwuu n'ihi na ọzọ, na ị na-atụgharị-elekwasị anya na gị na ụbọchị. Ị na-tapping n'ime ha na-eche na ezinụlọ. Ha pụrụ ọbụna na-ekpughe ma ọ bụrụ na-emecha ha ga-achọ ịmalite a ezinụlọ nke onwe ha. Ajụjụ a ga-enye gị a otutu okwu banyere ebe ọ bụ na mgbe a oké akụkọ gbara ya gburugburu na isiokwu nke ụmụnne.
Gịnị bụ gị ihe ịrịba ama?
Nke a bụ ihe oldie ma goodie. Ọ bụ ezigbo echiche ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịjụ ajụjụ a ná mmalite nke ụbọchị. Ndị mmadụ na-mmasị ha Zodiac ịrịba ama ọbụna ma ọ bụrụ na ha ekweghị na ịgụ kpakpando, ha ka na-kpam kpam na-emeghe ka nụrụ ihe i maara banyere ha ihe ịrịba ama. Zodiac ịrịba ama ndị ọzọ ndọtị nke anyị onwe anyị na dị ka ụmụ mmadụ na ọ dịghị ihe anyị hụrụ n'anya karịa ịmụta ihe ọhụrụ banyere onwe anyị.
Gịnị ka ị na-ele anya n'ihi na onye?
Nke a bụ ihe dị mkpa mbụ ụbọchị ajụjụ. Ọ bụ ihe a otutu daters zere arịọ ha n'ihi na ha achọghị ka mmenyenjo onye nke ọzọ pụọ. Ma na-arịọ ajụjụ a ga-enye nghọta na ụdị nke mmadụ na-enwetaghị gị ụbọchị anya na ebe ị tojupụtara elu tụnyere. Gbalịa ka-adị oke ịkatọ ndị ha zara ọ bụrụ na ị na-ekweta na ha. A na-adabere na ha onwe ha na a ga-anabata dị ka ndị dị otú ahụ. Mgbe ajụjụ a na-jụrụ, unu ga-amarakwa ihe n'aka ma ọ bụrụ na nke a mbụ ụbọchị nwere nwere iji agbawa ihe ọtụtụ ihe ndị ọzọ.